SANADKII 2018, 16.9 KUN OO OO DABACAS AH AYAA LAGA HELAY GOBOLKA STAVROPOL - MAQAALLO
Sida laga soo xigtay Wasaaradda beeraha ee Ruushka, sannadkii 2018-dii gobolka Stavropol ayaa la goostay karootiga, taas oo ahayd 16.9 kun tan. Waxtarka miraha celceliska ee kiiskan - in ka badan 260 kg / ha. 73% ka mid ah dabacasaha la soo ururiyey ayaa lagu koray dhulalka beeraha iyo 27% - beeraha.
Celceliska dhalidda dabacsan ee gobolka Stavropol ee 2018 wuxuu ka badnaa 260 sentimitir halkii hektar.
Dhirta ugu badan ee laga soosaaray ee Stavropol Territory waxay ku yaalliin dhulka degmada Krasnogvardeysky iyo degmada Ipatovsky degmada - 4.2 kun tan, oo ah 24.8% oo ah waxsoosaarka basabka ee gobolka. Wax yar ka yar cagaarka degmada Shpakovsky - 1.7 kun tan ama 10%, ayuu yiri Wasiir Ku-xigeenka beeraha Andrei Oleynikov.
Sanadka 2019, waxaa la qorsheynayaa in la ballaariyo aagga ka yar dabacasaha 8%. Sida khabiirada EastFruit horey u soo sheegnay, bishan ayaa suuqyada raashinka tayo fiican leh ee suuqa Suuqa Ruushka ay sii kordhayaan, iyadoo kaydka khudradda caanaha lagu kaydiyo, oo inta badan beeralayda ayaa dhammaystiray iibinta dabacasaha sannadkii hore.
Baahida loo qabo dabacasaha ma dhicin, taas oo u ogolaaneysa beeralayda inay qiimaha alaabtooda ku kiciyaan.